Maxaadan ogeyn oo kusoo kordhay xaaladda Hiiraan? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxaadan ogeyn oo kusoo kordhay xaaladda Hiiraan?
Xiisadda Siyaasadeed ee ka aloosan Baladweyne, ayaa mar kale cirka isku shareertay saacadihii la soo dhaafay, kadib markii uu soo baxay war sheegaya in Cali Guudlaawe, ku wajahan yahay magaalada.
BALADWEYNE, Soomaaliya – Xaaladda siyaasadeed ee gobolka Hiiraan ayaan wali dhinac u dhicin, xilli dhinacyada iska soo horjeeda uusan midkoodna ka tanasulin mowqifkiisii hore, ee kala qoqobka iyo kala qeybsanaanta sababay, waxaana saacadihii la soo dhaafay mar kale xoogeysatay xiisadda ka allosan Baladweyne.
Xalay fiidkii ayuu soo baxay war sheegaya in Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe, uu saaka ku wajahan yahay xarunta gobolka Hiiraan oo uusan cagaha dhigin tan iyo markii kursiga loo boobay, waxaana inta badan xaafadaha Baladweyne isku fidiyay ciidan dhawaan la geeyay magaalada, oo Gorgor iyo Haramcad ka tirsan.
Tallaabadas ayaa sababtay in xalay saq-dhexe uu shir jaraa’id Muqdisho ku qabto General Abuukar Xaaji Warsame [Xuud], isla-markaana uu ku gooddiyo in tagitaanka Guudlaawe, ee Baladweyne ay dhali doonto gacan ka hadal, isagoo muujiyay in looga baxay heshiis lala galay oo uusan shaacin wixii uu ku qotomay.
Saaka, inta badan waddooyinka magaalada ayaa xiran, waxaana meel kasta taagan askar afku u xiran yahay, adeegyadii waxbarashada ayaan jirin, halka goobaha ganacsigu aysan si caadi u furmin, qeybo ka mid ah xaafadaha Baladweyne, waxaa ku sugan ciidan diiiddan imaanshaha Guudlaawe, waxaana laga cabsi qabaa gacan ka hadal.
Arrinkaan, ayaa ku soo adaya xilli ay shalay Jowhar gaareen guddi heer Wasiirro ah oo dhawaan RW Rooble, u saaray xallinya xiisadda Hiiraan, kuwaas oo durba kulamo la qaatay MW Guudlaawe, waxaana xusid mudan in uusan wali dhaqan galin amarkii Xukuumadda ee ku aaddanaa in dib loo soo celi ciidanka la geeyay Baladweyene.
Madaxweyne ku-xigeynka maamulka, Yuusuf Dabageed iyo Goddoomiyaha Gobolka Cali Jeyte, ayaa geed dheer iyo mid gaaban u koraya in Guudlaawe, la geeyo Baladweyne, hayeeshee, inta badan mowqifka bulshada ku dhaqan magaalo madaxda, ayaa si adag kaga soo horjeeda guud ahaan Hirshabeelle iyo madaxtinnimada Guudlaawe.
Agaasimihii hore ee NISA, eedeysane, Fahad Yaasiin, oo ka mid ah shaqsiyaadka doonaya in ay helaan kuraas Baarlamaan, ayaa saameyn xooggan ku leh ciidanka la geeyay Baladweyne, wuxuuna diiradda saarayaa in magaalada ay ka dhacaan dagaallo kharaar, si doorashada kuraasta taalla Hiiraan loogu soo wareejiyo Shabeellaha dhexe.
Sida muuqata Villa Soomaaliya, ayaa gadaal ka riixeysa in Guudlaawe, la geeyo Baladweyne, iyada oo uga baddeleneysa dano siyaasadeed oo ay ugu horreeyaan kuraas baarlamaan, inkastoo dhawaan MW Hirshabeelle, uu ku gacan seyray farriin ka timid Fahad iyo Farmaajo oo ay ku doonayeen inuu u boobo kuraas ay leeyihiin beelo gaar ah.
Hirshabeelle, waxaa laga soo dooran doonaa 38 kursi, oo ay u soo codeyn doonaan 3,833 ergo, kuwaas oo doorashadoodu ka dhaceyso afar goobood, magaalada Jawohar, waxaa ka soo bixi doona 13 kursi, halka ay Baladweyne ka imaan doonaan 25 kursi, oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS.